आमा-बुबाको यस्तो सानो गल्तिले नै “तेस्रो लिङ्गी ” जन्मिनछन् – Bisal Chautari
- २२ माघ २०७४, सोमबार १०:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २०७४ माघ २२ सोमबार । मान्छे दुई जातका हुन्छन् । त्यो हो पुरुष र महिला तर पछिलो समय तेस्रो लिङ्गीको पनि पहिचान हुन थालेको छ । तिनीहरू यस्तो मान्छे हुन्छन् जुन हामी भन्दा केही फरक हुने गर्छन् ।
१. रुघाखोकी ज्वरो – प्रेग्नेंसीको पहिलो ३ महिनामा यदि गर्भवती महिलालाई रुघाखोकी ज्वरो आइरहेको छ र यदि उसले कुनै हेभि मेडिसिन खाएमा
४. दुर्घटना वा रोगी – प्रेग्नेंसीको पहिलो ३ महिनामा कुनै प्रकारको दुर्घटना वा रोगी भएमा शिशुको आर्गन्सलाई नोक्सान भएमा ।